I-Atami Tropical Rancho - I-Airbnb
I-Atami Tropical Rancho
Playa el Palmarcito, La Libertad, i-El Salvador
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-ElSAlVADOR
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Feb 17.
I-Atami Tropical Rancho iyindlu eseduze kakhulu phakathi komphakathi onesango emabhishi ase-El Zonte nase-El Palmercito. Ihlala phakathi kwamamitha-skwele angu-1000 ehlathi elishisayo, igquma eliluhlaza nomoya wasolwandle okukugcina kupholile usuku lonke. Ichibi elisha le-sparking lisenkabeni ye-villa. Ezinye izinsiza zifaka ikhishi elisha eligcwele sha kanye namadekhi amabili okuphumula.
I-ATR ihamba ibanga ukusuka e-Atami Club, Saltwater pools, Pelicanos restruante & Palmercito beach.
Akuyona indawo ephambi kolwandle, kodwa uthola ichibi langasese futhi uhamba nje ukusuka kokubili e-playa Leliona (ibhishi lika-Atami) kanye ne-Playa Palmercito. Futhi ungakwazi ukufinyelela i-Atami club namachibi amanzi anosawoti
Isanda kulungiswa futhi inendawo eminingi yokuphumula yangaphandle, i-WIFI yenza u-13-15mb/s, ichibi elishisayo, izindawo eziyimfihlo ezivikelekile, kanye nemibhede ehlanzekile, emisha EMAGUMBENI OKUBHELELA / okugeza angu-3 anethezekile kufika IZIVAKASHI eziyi-12.
Inekhishi elihlome ngokuphelele kanye ne-grill, indawo yokudlela evulekile yangaphandle engu-12.
ubusuku obungu-7 e- Playa el Palmarcito
Mar 19, 2023 - Mar 26, 2023
4.62 · 21 okushiwo abanye
Umphakathi wase-Atami ungumphakathi osondelene kakhulu nePalmercito no-El Zonte
My name is Tyler and I am your main host through El Salvador Retreats. We manage some of the most spectacular rental properties in the La Libertad, El Salvador area.
Ifoni noma umbhalo
UElSAlVADOR Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Playa el Palmarcito namaphethelo